नेपाल आज | मातृका यादवसँग डेरामा बस्ने हैसियत थिएन, आज करोडौंको मालिक हुनुहुन्छ (भिडियाेसहित)
मातृका यादवसँग डेरामा बस्ने हैसियत थिएन, आज करोडौंको मालिक हुनुहुन्छ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाल आजको नियमित भिडियो स्तम्भ ‘इतिहास र अनुभूति’मा डा. सुरेन्द्र केसीले वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा नगर्न नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । डा. केसीले पुरानै सोच, संस्कार भएका नेताहरुबाट ठूलो परिवर्तनको आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । डा. केसीले व्यक्त गर्नुभएको विचार उहाँकै शैलीमा निम्नानुसार छः
‘भौतिक योजना मन्त्रीले बैशाखपछि सडकमा खाल्डाखुल्डी देखिने छैनन् । देखिए भने मलाई फोन गर्नुहोला भन्नु हुन्थ्यो । अहिले हाम्रा सडकमा खाल्डाखुल्डी छन् कि छैनन् भन्नै परेन । गृहमन्त्रीले ठेकेदारलाई कारबाही गर्छु भने । तर भौतिक योजनामन्त्रीले कारबाही हुन दिन्न भने । एकै सरकारका दुई मन्त्रीले फरक विचार राखे । सिन्डिकेटविरुद्ध भ्रमबस लागेका रुपनारायण भट्टराईले दृढतापूर्वक काम गरे । कारबाही स्वरुप भौतिक योजनामन्त्रीले जगेडामा तानिदिए ।
नेवानी हुँदाहुँदै २ करोड खर्चेर प्रधानमन्त्री हिमालयन एअरलाईन्स चढेर १२५ जनाको डफ्फा लिएर चीन जानु भयो । अहिलेको संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । सुरुमा ओलीले १५–१६ जनामात्रै राख्नु भयो । उपप्रधानमन्त्री पनि राख्नु भएन । शैली ठिकै आयो भन्ने लाग्यो । अहिले त मन्त्रीको संख्या २४ र दुई उपप्रधानमन्त्री राख्नु भयो । शैली त पुरानै छ त । नयाँपन त म केही देख्दिनँ । पुरानौ सोचले नयाँ कुरा असम्भव छ ।
एउटा उद्योगमन्त्रीले दरबारमार्गमा छापा मारे । अहिलेका उद्योगमन्त्रीले उखुको मूल्य नतिर्नेलाई कारबाही गर्छु भने । तर स्पष्ट परिणाम देखिएन ।
नेतृत्वले व्यवहारबाट नै परिवर्तनको सन्देश दिनुपर्छ ।
पटकपटक मन्त्री भएकाहरुले अझै बिगारेका छन् देश । शिक्षामन्त्री पाँचौ पटक कुर्सीमा हुनुहुन्छ । अब निजी विद्यालयकै कुरा गरौं न । सरकारीमा भर्ना भन्ने कुरा ल्याउनु भयो । जुन सम्भव नै थिएन । यहि राजनीति र यिनै नेताले वाञ्छित प्रतिफल ल्याउँछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन सक्दिनँ । निजी स्कुल, एनजिओ, सहकारी सबै चलाउने यिनै नेता हुन् । अब यिनले यस्ता क्षेत्रका विकृति हटाउँछन् भनेर कसले पत्याउँछ ?
सार्वजनिक खपतका लागि समृद्धिको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएकोछ । अफ्ठ्यारो र गरिबी राखेरै शासन गर्ने उहाँहरुको चाहना हो । किनभने अफ्ठ्यारो र गरिबीमै कुशासन गर्न सकिन्छ । समृद्धि र प्राप्तिमा त सुशासन हुनुपर्छ ।
लालबाबु पण्डितको दिन नै सकियो । ५५ लाखको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि उहाँले प्रष्टीकरण दिन सक्नु भएन । उहाँको क्रेज घट्यो । अहिलेका सबै मन्त्रीहरुले आयको स्रोत श्रीमती देखाएका छन् । महिला मन्त्रीले पतिको सम्पत्ति देखाएका छन् । भौतिक योजनामन्त्रीले ५० करोडको मालिक देखाउनु भएको छ । पञ्चायतले समेत ४ बिघा मात्रै जमिन राख्न पाइने भनिएको थियो । उहाँ कस्तो कम्युनिष्ट हो ? नेपाल टिभीको पत्रकारले सम्पत्ति सोध्दा सञ्चारमन्त्रीले जागिरै खाइदिए भन्ने सुनियो ।
मातृका यादव मेरा मित्र नै हुनुहन्छ । उहाँको गरिबी अति धेरै थियो । डेरा भाडा तिर्ने हैसियत समेत नभएर उहाँ बालकोटको एउटा निर्माणाधीन (बन्दा बन्दै रोकिएको) कोठामा बिजोग गरी बस्नु हुन्थ्यो । म त्यही गएर उहाँलाई भेटेको छु । त्यो कन्तबिजोग अहिले पनि सम्झना छ । तर आज मातृका यादवसँग के छैन ? घर, जमिन, नगद, सुन ? सबै छ । यो कुरा ५–७ वर्ष अगाडिको कुरा हो । यति कम समयमा यति धेरै सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? यसको जवाफदेहीता चाहियो नी ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वृद्धभत्ता पाँच हजार पुर्याउने कुरा गर्नुभयो, ठोकुवा नै गर्नुभयो । बुढाबुढीले होला त नी भनेर भोट पनि हालिदिए । बजेटमा त त्यो आएन । युवा स्वरोजगारको कुरा पनि छ । औधौगिकरणको प्रक्रिया ऋणात्मक भएको छ । अर्थमन्त्रीले यसकालागि नाम मात्रैको पैसा छुट्याउनु भएको छ । के आधारमा औद्योगिकरण हुन्छ ? जवाफ चाहियो नी हैन ? ’